KAYIN STATE MEDICINAL PLANT RESOURCE CENTER - ကရင်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အဂရီစင်တာ အင်ကော်ပိုရေးတက်
KAYIN STATE MEDICINAL PLANT RESOURCE CENTER
ကရင်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အဂရီစင်တာ အင်ကော်ပိုရေးတက်
GAP and GIAHS
© Chinatsu Hyodo
By Ei Pyae Oo	/	May 17, 2021
ကျွန်ုပ်တို့ Kayin Nippon Foundation Agricenter Incorporated သည်ရွေးချယ်ထားသည့်ပန်းမျိုးစိတ်များကို အပင်ပေါက်ရန်အတွက်စမ်းသပ်မှု................
By Ei Pyae Oo	/	January 5, 2021
MR. KYAW MAUNG MAUNG PROGRAM DIRECTOR I have joined the Kayin State Medicinal Plant Resource Center in August 2019......
By Ei Pyae Oo	/	December 1, 2020
နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဂျပန်) မှ Masksများ လှူဒါန်းခြင်း
COVID-19 ကာကွယ်ရေးထောက်ပံ့မှုအနေဖြင့်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဂျပန်) မှ Masks အခုရေ စုစုပေါင်း (၁,၀၀၀) အားကရင်.....
By Ei Pyae Oo	/	November 16, 2020
Vinegar & Rice Husk Charcoal Production
Charcoal & Vinegar have been used principally in areas other than agriculture to improve the physical & chemical characteristic of soil and control insects and some kinds of plant diseases. Here we are making charcoal and vinegar......
By Ei Pyae Oo	/	October 9, 2020
Compost production is important for the farmers to improve the physical characteristic of soil they use. Next we’re sharing the information how to produce compost which we are using at our center....
By Ei Pyae Oo	/	September 2, 2020
ကောင်းမွန်စွာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) အသိအမှတ်ပြုလတ်မှတ်ပေး အပ်ပွဲ အခမ်းအနား
ကောင်းမွန်စွာ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) အသိအမှတ်ပြုလတ်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ၃၁ရက်နေ့၊နံနက်၁၀:၀၀နာရီ.....
By Ei Pyae Oo	/	August 28, 2020
ကျွန်ုပ်တို့စင်တာ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းCOVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများ ကင်းဝေးစေရန် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဦးစီးလုပ်ဆောင်ပေးနေသည့်ကာကွယ်သူနတ်သမီး
ကျွန်ုပ်တို့ ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင်များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်းကျောင်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှအရာရှိ နော်ဝါဝါကျော်သည်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရာရှိတစ်ဦးအ နေဖြင့်လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းလူတစ်ဦးမှ လူတစ်ဦး သို့COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများမရှိစေရန်.....
By Ei Pyae Oo	/	June 29, 2020
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစ္စရေးသံအမတ်ကြီးMr.Ronen Gil-Or သည်ကရင်ပြည်နယ်၏စိုက်ပျိုုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာအနာဂတ်ရှေ့အလားအလာများအားသိရှိလေ့လာရန်အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင်များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းသို့(၂၅.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်လာရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်......
By Ei Pyae Oo	/	June 22, 2020
Covid-19 Prevention Measures in Kayin State Medicinal Plant Resource Center
The following safety and health standards have been implementing in our Kayin State Medicinal Plant Resource Center aligned with the objectives of World Health Organization (WHO) and.....
By Ei Pyae Oo	/	March 13, 2020
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ အကြီးအကဲ ဥက္ကဌ စောမူထူးစေးဖိုးမှ ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင် များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း ကျောင်းသို့လာရောက် လေ့လာခြင်း
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ အကြီးအကဲ ဥက္ကဌ စောမူထူးစေးဖိုးမှ ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင် များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း ကျောင်းသို့လာရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်.........
သိပ္ပံအမည်။ Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees မျိုးရင်း။ Acanthaceae အသုံးပြုပုံအစိတ်အပိုင်း။ ပဥ္စငါးပါး (အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အစေ့) (လတ်ဆတ်သော၊ ခြောက်သော)၊ အပင်။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။… Continue Reading
Copyright©️ by Kayin State Medicinal Plant Resource Center